61 Weerar oo Afrika ka dhacay September ayaa sababay dhimashada 1006-ruux! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta 61 Weerar oo Afrika ka dhacay September ayaa sababay dhimashada 1006-ruux!
61 Weerar oo Afrika ka dhacay September ayaa sababay dhimashada 1006-ruux!
Qaaradda Afrika waxaa September 2021 ka dhacay 61-weeraro oo ah “Kuwo Argagixiso” & (Rabshadaha) waxa ay galaafteen Nolosha 1006 (Kun & lex ruux) sida ay shaacisay Mu’asasada Nabadda, Horumarka & xuquuqul Insaanka Maacat ee fadhigeedu yahay Dalka Masar.
608-ruux oo ah boqolley ahaan ah 60% Dadkaan waxa ay ku nool yihiin Bariga Afrika sidaas ayaa lagu muujiyay Daraadda lagu xog-ogaaday weerarada & khasaaraha ka dhashay, Rabshadaha Itoobiya waxaa keliya ku dhintay 541-ruux.
Daraasadda ayaa lagu sheegay in Soomaaliya September 2021 ay ka dhaceen 17-weerar balse ma sheegin waxyeelada ka dhalatay in ay gaarsiisan tahay, Mu’asasada ayaa warbixinteeda billaha ah ku shaacisay in weeraradu weli ay kasii socdaan Qaaradda.
Aymen Caqiil oo ah Khabiir arrimaha Xuquuqda Aadanaha ahna Madaxa mu’asasada Maacat ayaa dhaliilay xeeladaha Dowladaha Afrika ay uga hortagayaan weerarada uu ugu yeeray “Argagixisada”.
Waxa uu soo jeediyay in la dejiyo qorshooyin cusub oo aan ahayn xalka militariga oo lagu xakameyn waayay weerarada sida uu ku dooday Madaxa Hay’adda Maacat ee diiwaangelisa Weerarada ka dhaca Afrika & khasaaraha ka dhasha.
Aymen ayaa soo jeediyay in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdooyinka ay ku lugta leeyihiin Ciidamada Nigeria ee ku sugan Waqooyi Bari Dalkaas & Askarta Midowga Afrika AMISOM oo August 2021 Dad rayid ah ku dilay Soomaaliya.
Cabdiladiif Juudah oo ah Cilmi baare katirsan waaxda Afrika ee Mu’asasada Maacat ayaa dalalka dhaca Galbeedka Afrika usoo jeediyay in ay sameystaan is gaashaanbuureysi ka dhan ah xoogagga ka dagaalamaya dalalkaas si ay u yareeyaan ku tiirsanaanta Faransiiska.
Boko Haram, Daacish & kooxaha kale ee ka dagaalama Bariga Afrika ayuu ku tilmaamay in ay xoojinayaan weeraradooda halka Dowladaha ay ku dhex nool yihiin kaalintooda noqon karto sidii ay isaga kaashan lahayeen sida uu hadalka u dhigay Cabdiladiif Juudah.
Hay’ado iyo ururro caalami ah ayaa dabagal ku sameeya weerarada, dilalka & khasaaraha ka dhasha Duullaanka waxa ay uga yeeraan “Argagixisada” iyaga oo inta badan dhaliila Dowladaha & taageerayaasha Caalamiga ah sida Askarta Qaramada Midoobay, Midowga Yurub ama Afrika.
Previous articleDuqa Muqdisho oo xariga ka jaray laami lacagtii lagu dhisay ay bixiyeen Dadka Deegaanka.
Next articleBooliiska AMISOM oo la geeyay Dhuusamareeb & Baraawe.